फागुनमा नहुने कांग्रेस महाधिवेशनको नयाँ मिति कहिले ? – Nepal Press
फागुनमा नहुने कांग्रेस महाधिवेशनको नयाँ मिति कहिले ?
२०७७ पुष २० गते १४:१४
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकले क्रियाशील सदस्य नवीकरण र नयाँ वितरणको अन्तिम मितिका सम्बन्धमा निर्णय लियो । निर्णय अनुसार जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम विवरण र आवश्यक कागजात केन्द्रमा बुझाउने मिति २०७७ साल माघ मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको २०७६ साल माघ १३ गते बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महाधिवेशनका लागि महत्वपूर्ण मानिने क्रियाशील सदस्यताको प्रारम्भिक टुंगो समेत नलागेका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ । माघ मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमै बुझाउने अन्तिम मिति तोकिए पनि कार्यतालिकाका अन्य सबै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशन फागुन ७ मा उद्घाटन हुने सबै सम्भावना टरिसकेका छन् । तर पनि कांग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छैन । नयाँ मिति नतोक्नुका कारणबारे नेताहरुको फरक–फरक बुझाई छन् ।
संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक करार गर्दै कांग्रेसले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आन्दोलनसंगै अदालतको निर्णयसमेत कांग्रेसले कुरिरहेको छ । त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको विवादको निष्कर्ष पनि कांग्रेसले पर्खिरहेको छ ।
संसद विघटनपछिको राजनीतिक परिदृश्य प्रष्ट नभइसकेका कारण कांग्रेसले फागुनमा नहुने महाधिवेशनको नयाँ मिति नतोकेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा नहुने निश्चित भएपनि नयाँ कार्यतालिकाबारे छलफल जारी रहेको बताउँछन् ।
‘कोरोनाका कारण प्रभावित महाधिवेशन कार्यतालिकालाई व्यवस्थित गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी प्रतिवद्ध छ । महाधिवेशनको नयाँ मिति र थप कार्यतालिकाबारे उपयुक्त समयमा निर्णय हुनेछ’, प्रवक्ता शर्माले भने ।
महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नहुने निश्चित भइसकेपछि पनि नयाँ कार्यतालिका नआउनुका पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रम निर्णायक छन् ।
जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमै सभापति देउवाले पार्टीका निर्णयहरु राष्ट्रिय राजनीतिका परिवेश अनुसार हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘संसद विघटनबारे अदालतले के भन्छ ? नेकपा औपचारिक रुपमा फुटिसकेको छैन । यसबारे निर्वाचन आयोगले के भन्छ ? यो सबै विचार गरेर हामीले निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ’, देउवाले जारी बैठकमा भनेका थिए ।
कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपनि जतिसक्दो चाडै महाधिवेशन सक्नुपर्ने बताउँछन् । केन्द्रीय समितिको पुस ९ गतेको बैठकमा बोल्ने क्रममा सिंहले नै क्रियाशील सदस्यता बुझाउने अन्तिम मिति माघ मसान्तसम्म तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘क्रियाशील सदस्यताको लागि नयाँ मिति दिइएको छ । अब महाधिवेशनको उपयुक्त मिति तोक्न पनि ढिला गर्नुहुँदैन । आन्दोलनसंगै पार्टीको आन्तरिक काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ’, सिंहको भनाई छ ।
कांग्रेस विधानमा नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमिति २०७२ साल फागुनमा निर्वाचित भएको थियो । विधानमै रहेको १ वर्ष कार्यकाल लम्बयाउन पाउने सुविधा प्रयोग गर्दै वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल २०७७ फागुनसम्म बढाइएको थियो ।
अब कांग्रेस विधानअनुसार नभई नेपालको संविधानअनुसार वर्तमान कार्यसमितिको म्याद अधिकतम ६ महिना थप हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक हिसाबले पनि २०७८ भदौंसम्म कांग्रेस महाधिवेशन भइसक्नुपर्नेछ । कांग्रेस सभापति देउवा भदौंमा महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । इत्तर पक्षले भने जेठभित्रमा महाधिवेशन सक्नेगरी नयाँ मिति तोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रकाशित: २०७७ पुष २० गते १४:१४